Xag-wadareed: Isha Furan Nidaamka Deegaanka ee loo yaqaan 'DeFi Ecosystem for Blockchain Networks' Laga soo bilaabo Linux
Mawduucan ugu horreeya ee Juun, waxaan ku wajihi doonnaa mid kale Horumarka Isha Furan ee DeFi Realm. Gaar ahaan waxaan baari doonnaa oo baran doonaa waxyaabaha muhiimka u ah xiisaha iyo waxtarka leh Qalabka DeFi (Nidaamka Deegaanka)wacid «Geesoolayaal », kaas oo ka kooban buugaagta sii kordhaya ee codsiyada furan iyo kuwa aan la furin.
«Geesoolayaal », asal ahaan waa a hab maamuuska iyo qaab dhismeedka horumarka loo isticmaali jiray dhisida iyo isku xirka shabakadaha xannibaadda la jaan qaadaya Ethereum. Dhammaan waxa ku saabsan barxad ujeedadeedu tahay in la abuuro shaqooyin cusub oo kordhiya awoodda shabakadda lafteeda, si loogu beddelo nidaam ballaadhan, aad uga dhakhso badan, ka raqiisan oo si fudud looga heli karo dhammaan adeegsadayaasha muddada fog.
Iyo sidii caadiga ahayd, kahor intaadan u galin faahfaahinta farsamada mawduuca hadda jira "Geesoolayaal", ayaa mudan in la xusuusiyo, noo qoraalkii ugu dambeeyay ee la xiriira del Dunida DeFi, oo wax ka qabtay isaga Horumarka Isha Furan loo yaqaan "Kombiyuutarka Internetka", oo ku saabsan mashruuc lagu sifeeyay sidan soo socota:
"" Kumbuyuutarka Internetka "waa mashruuc il furan oo lagu doonayo in lagu kordhiyo waxqabadka internetka dadweynaha ee hadda jira, si ay u martigeliso barnaamijyada kombuyuutarrada gadaal looga dhigo, iyadoo loo beddelayo madal xisaabeed caalami ah. Si ay horumariyayaashu u abuuri karaan degello internet, nidaamyada xisaabinta ganacsiga iyo adeegyada Internetka, iyagoo si toos ah ugu xiraya koodhadhkooda internetka dadweynaha isla markaana ay ku bixinayaan kombuyuutarrada adeegga iyo adeegyada daruuraha ganacsiga. " Kombiyuutarka Internetka: Meel furan oo laga helo barxad xisaabeed wadajir ah
1 Geesoolayaal: Internetka 'Ethereum Blockchains'
1.1 Waa maxay geesoolayaal?
1.3 Soosaaray Codsiyada Meel Furan
1.4 Ku xirnaanta cryptocurrency
Geesoolayaal: Internetka 'Ethereum Blockchains'
Waa maxay geesoolayaal?
Sida laga soo xigtay degel rasmi ah oo ka mid ah horumariyeyaasheeda, tan DeFi Open Source Mashruuca Waxaa lagu tilmaamay:
“Hab maamuus iyo qaab dhismeed dhisid iyo isku xirka shabakadaha isku xirnaanta xayiraadda Ethereum. Taasi waxay sidoo kale ku dareysaa xalalka la qiyaasi karo ee Ethereum oo taageeraya silsilado badan oo deegaanka deegaanka Ethereum ah. "
Intaas waxaa sii dheer, waa muhiim in la muujiyo kuwa aqoonta yar u leh Dunida DeFi, in "Geesoolayaal" intii aan loo aqoon sidii «Shabakada Matic». Mashruuca dhashay, ujeeddadiisuna ahayd cusbooneysiinta dhismaha Ethereum, oo markaa lagu gaaro horumar marka la eego isdhexgalka isticmaaleyaasha iyo adeegsiga, taas oo ah, in la yareeyo kakanaanta of madal, halka kordhinta ah xawaaraha hawlgallada iyo macaamillada ganacsiga, waana la dhimay qiimaha ka sarreeya shabakadda.
Maanta, "Geesoolayaal" o "Shabakada Matic" waa heer sare Barxadda DeFi kaas oo ku saleysan maktabado waaweyn oo tayo sare leh, halkaas oo aad ka abuuri karto codsiyada baahinta (Dapps), labadaba shabakadda iyo qalabka moobiilka. Kuwa badan oo ka soo jeeda Il furan, oo gadaal ayaan ka baari doonnaa.
Xilligan, astaamaha ugu muhiimsan ee tan Barxadda DeFi Waxay yihiin:
Waa a furfuran oo awood leh barnaamijka 'DeFi'.
Leh a heerka sare ee isugeynta, kaas oo hagaajiya xawaaraha macaamil ganacsi, wuxuu yareeyaa qiimaha hawlgallada, wuxuuna kordhiyaa amniga, kaas oo mas'uul ka ah istiraatiijiyadda isku raacsan ee 'PoS algorithm'.
Waxay bixisaa a hagaajinta wada shaqeynta u dhexeeya silsiladaha dhinaca, taas oo u oggolaanaysa isticmaalka weyn ee shabakadda Ethereum.
Qeybteeda ugu weyni waa "Polygon SDK", oo ah qaab horumarineed il furan Waxay taageertaa abuurista noocyo badan oo codsiyo ah, oo u oggolaanaya horumariyeyaashu inay hirgeliyaan silsilado la jaan qaadi kara Ethereum, oo shabakadda u rogaya nidaam silsilado badan leh.
"Polygon SDK wuxuu ujeedkiisu yahay inuu Ethereum u rogo nidaam silsilado fara badan oo buuxa, isagoo u soo bandhigaya qaab dhismeedkan nidaamkan dabiiciga ah isla markaana siinaya qaab dhismeedka silsiladaha badan ee Ethereum inay si dhakhso leh oo dhakhso leh u koraan."
Soosaaray Codsiyada Meel Furan
Qaar badan oo ka mid ah Isha furan Codsiyada baahinta (DApps) ama aan ahayn, ka jira ama lagu horumariyey gudaha, loogu talagalay ama lala jiro "Geesoolayaal", waxaa lagu buuxin karaa shabakadda Geesoolayaal Cajiib ah, Shabakada DApps Matic y Dhirbaaxo Defiprime. Iyo inta udhaxeysa Isha furan DApps iftiimiyay waxaan xusi karnaa 3dan soo socota:
Aave: Ilo furan, maamuus xisaabeed aan ilaalin ahayn oo lagu kasbado dulsaar dhigaalka iyo amaahda hantida. Daawo Web y GitHub.
Gawaarida: DAO (Awood Daadejin Maamul Aas Aas ah ama Awood Daadejin Maamul) oo lagu dhisay habsami u socodka horumarinta adeegyo sahlan oo la adeegsan karo iyo adeegyo loogu talagalay nidaamka deegaanka ee DeFi. Waxay sidoo kale loola jeedaa saldhig ganacsi oo baahsan oo furan. Daawo Web y GitLab.
Xisaabta Xisaabta: Jeebka-iskutallaabta oo taageera in ka badan 38 nidaamyada silsiladda silsiladda guud sida EOS, TRX, BTC, ETH, BinanceChain, Cosmos, IRISnet. Daawo Web y GitHub.
Ku xirnaanta cryptocurrency
Ugu dambeyntii, waxaa xusid mudan in tan DeFi World Open Source Mashruuca wuxuu la xiriiraa Lacag-bixinta si isku mid ah loogu yeero Geesoos (Matic). Kaas oo hadda qayb ka ah Top 20 ee lacagaha ugu waaweyn ee loo adeegsado suuqgeynta suuqa, iyagoo ag taagan kuwa kale ee la aqoonsan yahay, sida Litecoin (LTC) iyo Stellar (XLM).
"Polygon waa mashruuc furan oo furan oo ay dhisteen koox baahsan oo wax ku biirisa adduunka oo dhan."
Wixii macluumaad dheeraad ah ee arrintan ku saabsan Horumarka Isha Furan duurka Defi loo yaqaan "Geesoolayaal" o "Shabakada Matic" waa la sahamin karaa Websaydhka rasmiga ah ee GitHub.
Waxaan rajeyneynaa tan "waxtar yar post" ku saabsan «Polygon», Madal xiiso leh oo waxtar leh ama DeFi Ecosystem, oo ka mid ah barnaamijyo badan oo furan ama aan ahayn, ayaa lagu daraa a hab maamuuska iyo qaab dhismeedka horumarka in la dhiso oo la isku xiro shabakadaha xannibaadda la jaan qaadaya Ethereum; waa mid aad u daneyn iyo faa iido u leh, dhamaantiis «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» iyo wax ku biirinta baahinta ee nidaamka deegaanka ee cajiibka ah, weyn iyo sii kordhaya ee «GNU/Linux».
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Xag-wadareed: Furan Ido Decos Ecosystem for Blockchain Networks
Shirkadaha xayeysiinta waxay raadiyaan siyaabo ay ugu xirmaan xogta kale FLoC